प्रकृति संरक्षणका लागि भूटानको त्याग
करिब आठ लाख जनसंख्या रहेको भूटानले राम्रो सिजनमा प्रतिपर्यटक दैनिक दुईसय ५० डलर लिन्छ, तर त्यसका लागि पर्यटकको संख्या पनि तोकिएको छ । कतिपय ठाउँमा पर्यटकको घुँइचोले सुन्दरता उजाडिएकामा भूटान चिन्तित छ ।
हरित विकास पथको अवलम्बन गरिरहन भूटानलाई बाहिरी विश्वको साथ सहयोग जरुरी हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन् २०१५ को पेरिस जलवायू सम्झौताबाट अलग्गिने घोषणा गरेलगत्तै भूटानजस्ता मुलुकले हरितगृह जोगाएबापतको रकम प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
उक्त सम्झौताबमोजिम, धनी राष्ट्रले विकासशील मुलुकहरुलाई हरितगृह जोगाए बापत सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।
यसबाहेक, माथिल्ला हिमाली भेगमा समेत बाढी रोकथाम गर्न नयाँ ढल निर्माणका लागि कामदारहरु खटाउनु परेको छ, वाङ्मोले भने । “यी कामका लागि धेरै रकम र जनशक्ति आवश्यक पर्न थालेको छ । तर त्यस्तो रकमको जोहो गर्न र क्षमता–निर्माण गर्न भूटानजस्ता देशले कसरी सक्छन् ?”
“मेरो विचारमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न तथा प्रकृतिलाई जतिसक्दो मौलिक बनाइराख्न भूटानको योगदान अतुलनीय छ,” दोर्जीले भने । “हाम्रो अभियान समर्थनको लायक छ । हामीलाई बढी होइन, कम्तीमा समान रुपबाट पुरस्कृत गर्नु पर्दछ ।”
काठमाडौँ । किरात समुदायका राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवारलगायतका जातिले महान चाडका रुपमा आज उभौली पर्व मनाएका छन् । यस अवसरमा आज किराती परम्पराअनुसार भूमिको पूजा गरियो । प्रकृतिका पूजक किरातले
प्रकृति, पेन्टिङ र मानवमूर्तिहरू
हावाका खेलहरू, मेघका गर्जनहरू, आँधी-तुफानका चमत्कारहरू कहाँ छन् यी सबैका रचनागर्भ ? मान्छे, समाज, राष्ट्र, राष्ट्रियता के हो यिनीहरूको उपादेयता ? प्रकृतिको स्वभाव उस्तै छ आजपनि, मौनता । उभिएको छु
प्रकृतिको रक्षाका लागि सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ । विपत्का समयमा जनतालाई सुरक्षित बनाउन, सूचना प्रदान गर्न र सङ्कटबाट बचाउनका निम्ति एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्रियाशील रेडियो र टेलिभिजनको पाँचौँ सम्मेलन आजदेखि यहाँ शुरु भएको छ । सम्मेलनको